I-4/27 South Street - I-Airbnb
I-4/27 South Street
Tuncurry, New South Wales, i-Australia
U-Emma unokuphawula okungu-29 kwezinye izindawo.
I-4/27 South Street. I-villa enamakamelo okulala amathathu elungisiwe, enomshini ophephetha umoya ne-Wi-Fi. Itholakala ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukuya ezitolo ze-Tuncurry, amathilomu nezindawo zokudlela, amakhilomitha angu-115 ukuya ebhishi noma ujabulele ukutshuza e-Tuncurry rock pool 1.3km.
I-villa enamakamelo okulala amathathu elungisiwe, Itholakala ebangeni elingahanjwa ngezinyawo ukuya ezitolo ze-Tuncurry, amathilomu nezindawo zokudlela, amakhilomitha angu-115 ukuya ebhishi noma ujabulele ukutshuza e-Tuncurry rock pool 1.3km.
Ikamelo lokulala elikhulu linikeza umbhede omkhulu, ikamelo lesibili nelesithathu kokubili elinombhede olala umuntu oyedwa. Wonke amakamelo okulala anamafeni kasilingi futhi akhelwe kuma-wardrobes.
Jabulela ukuphumula endaweni yokuphumula enesiphephethisi ne-smart tv ne-Wi-Fi. Ikhishi elinakho konke linomshini wokugeza izitsha ne-microwave kuzo zonke izidingo zakho zokupheka. Indawo yokudlela iyakwazi ukungena ku-patio encane emboziwe. Ilondolo yangaphakathi enomshini wokuwasha nomshini wokomisa.
Kukhona igalaji elilodwa nendawo enkulu yokupaka emgwaqweni etholakalayo.
Amashidi awahlinzekwa kodwa angaqashwa ngokuhlala kwakho, isibopho sika- $ 500 sisebenza kukho konke ukubhukha.
Njengengxenye ye-Pacific Coast Holidays Team siyatholakala ezivakashini zethu kukho konke ukuhlala kwazo. Ikhaya lamaholidi ngelakho ukuthi ulijabulele futhi uphumule kulo kodwa uma usidinga sikhona nje ucingo.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-11998
Hlola ezinye izinketho ezise- Tuncurry namaphethelo